Tag: hetsika fanarahana | Martech Zone
Tag: fizarana hetsika
Alatsinainy, Jolay 10, 2017 Alakamisy, Jolay 13, 2017 Douglas Karr
Eny, efa elaela izay no nizarako toro-hevitra momba ny fandaharana amin'ny WordPress. Tato ho ato dia niverina teo amin'ny dabilio aho nametraka kaody ho an'ny mpanjifanay rehetra ary nahafinaritra ahy ny niverina teo am-piandohan'ny raharaha. Mety nahatsikaritra ny fampidirana Whitepaper Marketing vaovao manerana ny tranokala ianao - tetikasa nahafinaritra tokoa izany! Androany, nanana olana hafa aho. Maro amin'ireo mpanjifanay no manana bokotra napetraka amin'ny alàlan'ny ray aman-dreny
Inona no tokony hotadiavinao mba hamotehana ireo tanjon'ny fiovam-ponao
Alakamisy 13, 2014 Alatsinainy Janoary 9, 2017 Max Kremer
Amin'izao andro izao, saika ny fitaovan'ny analytics rehetra dia mamela anao hanara-maso ireo hetsika tsindrio. Ny tsindry dia maneho ny ankamaroan'ny fifandraisan'ny mpampiasa amin'ny tranokalanao. Fa raha vao manana izany angona izany ianao, inona izao? Azonao atao ny manara-maso ny tsindry tokana ataon'ny mpitsidika, saingy be dia be ny angon-drakitra hanasiana izany. Ny fanaraha-maso ny tsindry, raha ampiharina tsara, dia mety ho iray amin'ireo fitaovana matanjaka indrindra hahafantarana tsara ny fomba fandraisan'ny olona ny atiny sy ny fomba
Zoma, Jona 13, 2014 Zoma, Jona 13, 2014 Douglas Karr
Maro amin'ireo mpanjifanay no manana lozisialy ho toy ny mpanome tolotra ary samy manana tranokala sy tranokala fampiharana. Manoro hevitra anay izahay roa fa matetika no tazonina misaraka satria tadiavinao ny fahamoran'ny rafitra fitantanana atiny ho an'ny tranonkalanao, fa tsy te-ho fehezin'ny fifehezana kinova, fiarovana ary olana hafa amin'ny fangatahanao. Na izany aza, mitondra fanamby izany raha ny amin'ny Google Analytics rehefa manana kaonty roa misaraka ianao -
Mbola betsaka ny tsy fahazoan-kevitra momba ny famaritana ny tahan'ny fihenam-bidy, ny fiantraikany ratsy eo amin'ny tranokalanao, ary ny fomba ahafahanao manatsara azy. Koa satria mampiasa ny Google Analytics ny ankamaroanao, dia zava-dehibe ny fahatakarana ny fomba itondran'i Google ny fitsabahana. Voalohany, mety tsy ho tsapanao izany fa ny salan'isa Fotoana eo amin'ny tranokala ho an'ny mpitsidika voatarika dia mitovy isa aotra. Raha lazaina amin'ny teny hafa, rehefa mijery ny Time Average ao amin'ny tranokala ianao dia io ihany